प्रधानमन्त्रीलाई कप्तान किरणको पत्र : रंगशालामा म्युजिक भिडियो खिच्‍न हुने, फुटबल खेल्न नहुने ? – ramechhapkhabar.com
प्रधानमन्त्रीलाई कप्तान किरणको पत्र : रंगशालामा म्युजिक भिडियो खिच्‍न हुने, फुटबल खेल्न नहुने ?
कोरोना महामारी बढेसँगै नेपाली खेलकुद क्षेत्र ठप्प जस्तै छ । कोरोना संक्रमितको दर ह्वात्तै बढेपछि प्रशिक्षणको तयारीमा जुटेका खेलाडीलाई फर्काइएको छ भने खेलकुदका मुख्य निकाय बन्द गरिएका छन् ।
सन् २०२२ को कतार विश्वकप र सन् २०२३ मा चीनमा हुने एसिया कपको छनोट प्रतियोगिता खेलिरहेको राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षण भदौ १ देखि सुरु गर्न अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले देशभर रहेका खेलाडीलाई काठमाडौं बोलाएर क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो ।
यसबीचमा साउन २६ र २७ गते ५५ जना खेलाडी तथा अफिसियलको कोरोना परीक्षण पनि गरेकामा एक खेलाडीमा संक्रमण देखिएको थियो । त्यसपछि नेपाली फुटबलको गतिविधि पनि बन्द नै छ ।
पछिल्लो समय कतार विश्वकपका लागि दक्षिण अमेरिकी समूहको छनोट खेल भइरहेका छन् । दर्शकविहीन रंगशालामा इंग्लिस प्रिमियर लिग, इन्डियन प्रिमियर लिग, फ्रेन्च लिग, बुन्डेसलिगा, सिरी ए जस्ता ठूला प्रतियोगिता भइरहेका छन् । नेपालमा पनि पछिल्लो समय भर्चुअल रुपमा तेक्वान्दोका केही प्रतियोगिता भइरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‍का सदस्य सचिव तथा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै खुला पत्र लेखेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री र राखेप पदाधिकारीसँग स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सम्पूर्ण खेलकुदका गतिविधि सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका छन् ।